Na-ege ntị Spotify maka iPhone online ma ọ bụ Spotify offline iPhone e
Spotify bụ ihe kasị mma music ikpo okwu maka nzube nke na-ege ntị songs ma offline ma ọ bụ online. Na Spotify, na ọrụ na-nyere nnukwu nhọrọ ọtụtụ atụmatụ metụtara na Spotify na elu àgwà music, na-ọrụ nke Spotify na-mgbe na-ekwe nkwa na ihe kasị mma. Ọ bụ n'elu ikpo okwu nke na-ahapụ nzi ohere nke ọtụtụ nde ndị songs na site na ndepụta nke ochie songs ka Kacha ọhụrụ n'anya, na ohere ka ọtụtụ nde songs bụ ugbu a na-alụbeghị di click.
1. Spotify ọrụ
2. Olee otú ige ntị Spotify maka iPhone online
3. Olee otú ige ntị Spotify maka iPhone offline
1 Spotify ọrụ
E nwere atọ Spotify ọrụ, nke nwere ike edepụtara dị ka Spotify free, ikpe, Spotify adịchaghị maka iPhone ọrụ.
Spotify free bụ nanị otu ụdị Spotify, nke-abịa free nke ọnwa. Maka price nke 0,00 dollar kwa ọnwa, na 'ịkpọgharịa play' nhọrọ na Spotify ngwa-abịa ná owuwu nke ọrụ. Otú ọ dị, ngwa ga-bụghị Njirimara ndị a ụlọ ọrụ. The atụmatụ dị ka 'Ad free, na-akparaghị ókè skips, Listen offline, Play ọ bụla track na HQ audio' bụ adịghị na Spotify free. Spotify free adịghị ekwe ka ndị ọrụ ka nwere ndị na ohere ka songs mgbe na offline mode. N'ihi ya, ọ bụla na-ege ntị nke songs mgbe ọrụ na-anọghị n'ịntanetị bụ ekwe omume.
The Spotify Trial-enye ọrụ otu nhọrọ inweta adịchaghị atụmatụ nke Spotify enweghị okodu ihe ọ bụla. Na adịchaghị nhọrọ dị free nke na-eri maka gburugburu ụbọchị 30 n'ihi na ọtụtụ nke mba, ndị ọrụ na-nyere otu nhọrọ na Iweputa music, na-enweghị mgbasa ozi na elu definition music. Na nhọrọ nke gburugburu ụbọchị 30 n'ihi na ikpe version, ndị ọrụ nwere zuru ezu ohere ka adịchaghị ọrụ nke Spotify. Ọ na-adabere ọrụ mgbe Mmebi nke ụbọchị 30 ma iji pụọ na adịchaghị ọrụ ma ọ bụ ịnọgide na-free version nke Spotify.
3) Spotify adịchaghị
Spotify adịchaghị bụ ihe kasị mma atụmatụ nke Spotify nke na-enye ohere ọrụ, ọ bụla nhọrọ na-egwu music n'oge ọ bụla. Na dị nnọọ price nke 9,99 dollar kwa ọnwa, ịkpọgharịa play, Ad free, na-akparaghị ókè skips, Listen offline, Play ọ bụla track, HQ audio music dị maka ọrụ. Spotify adịchaghị bụ mmasị na otu ezigbo mkpa mma n'ụdị offline Music na-ege ntị nhọrọ dị ka ọrụ maka adịchaghị udi. Ha nwere nhọrọ na-ege ntị music ọ bụla oge nke oge, si n'ebe ọ bụla n'ụwa na-enweghị njikọ Ịntanetị.
Na-ege ntị Spotify maka iPhone online nwere ike availed site na free na adịchaghị ọrụ nke Spotify. Ma na udi nke ọrụ bụrụ na nke online pụrụ ige ntị na nnukwu udi nke music dị na nchekwa data nke Spotify. Otú ọ dị, àgwà nke music dị iche na ma ikpe. Na free na akaụntụ, ọrụ nwere ohere ka music na 192 kbps mgbe na adịchaghị na akaụntụ nke Spotify, ndị ọrụ nwere ike inweta na music ke kasị elu ọnụego nke 320 kbps.
1 Olee otú ibudata ngwa n'ihi na iPhone
Otu ụzọ iji na-enweta Get free adịchaghị bụ site otu oge ikpe oge ma ọ bụ na nkwado ịzụrụ.
Iji na-ege ntị Spotify maka iPhone Ọrụ online, ihe niile ị chọrọ bụ ibudata ukara ngwa n'ihi na otu ihe ahụ. Mgbe ị chọọ na ngwa ahịa na isiokwu 'Spotify', akpa N'ihi ya, nke na-abịa na gị na ihuenyo, bụ Spotify ukara ngwa. Dị pịa na ya na ibudata ya.
3 otú ige ntị online on iPhone ngwa
Nhọrọ na-egwu Spotify music on iPhone online-agụnye ojiji nke internet dị nnọọ na otu ụzọ ahụ dị ka Spotify maka na desktọọpụ. Dị ka a gụgharia ọrụ, Spotify na-eji ihe na-arụsi ọrụ njikọ Ịntanetị na-egwu music. -Echeta mgbe nile na eziokwu na adịchaghị ọrụ nwere na-anọghị n'ịntanetị mode nhọrọ, mgbe free ọrụ naanị nwere ohere na Spotify ọrụ mgbe ejikọrọ na Ịntanetị.
Spotify adịchaghị ohere ọrụ na-egwu listi ọkpụkpọ offline. Nke a owuwu bụ a zuru okè n'ihi na ụgbọelu agafe, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla n'ụwa ebe internet ohere adịghị.
Nzọụkwụ na Play Spotify music on iPhone offline
N'ihi nzube nke na-ege ntị Spotify music on iphone offline, nzọụkwụ ndị dị ka ndị:
Nzọụkwụ 1: Na-arụsi ọrụ ike njikọ Ịntanetị, họrọ a playlist
Nzọụkwụ 2: Site na ndabara ị ga-mkpa jikọọ n'elu Wi-Fi. Ọ bụrụ na ị ga-amasị ka mmekọrịta tracks n'elu 3G / 4G, gbanwee on 'mmekọrịta n'elu Cellular' na Ntọala na mgbe ahụ Music Ogo
Nzọụkwụ 3: Kpatụ E Nwere anọghị n'ịntanetị na-NA ke n'elu nke playlist
Nzọụkwụ 4: A green akụ ga-apụta ọzọ na playlist mgbe ọ bụ dị
Tụgharịa na-anọghị n'ịntanetị na ọnọdụ na Ntọala na mgbe ahụ playback na tapping ngbanwe na n'elu
Download Spotify music free na TunesGo na-ege ntị n'oge ọ bụla ọ bụla na ngwaọrụ
Olee otú nweta nkwalite Spotify ka Spotify adịchaghị ma ọ bụ iji Spotify Unlimited
Spotify Guide maka Beginners
> Resource> Spotify> Spotify maka iPhone online ma ọ bụ Spotify offline maka iPhone